HALKEE CALEEMAHA SONKORTA KU KORAYA EE RUUSHKA: MEELAHA AY YIHIIN KUWA BEERTO INTA BADAN KU YAAL, WADDAMADA AY YIHIIN HOGGAAMIYEYAASHA WAX SOO SAARKA IYO DHOOFIYAYAASHA KHUDAARTA? - BEER CAGAARAN
Waxa ugu muhiimsan waa jawi wanaagsan. Halkee ku yaal adduunka iyo Ruushka waxay ku koraan xididdo sonkorta leh?
Xabbad sonkor ah waa dalag farsamo. Waa walaxda ugu muhiimsan ee wax soo saarka sonkorta. Wax-soosaarku wuxuu ku xiran yahay tilmaamayaasha cimilada iyo xaaladaha sii kordhaya.
Beeraha adduunka, dabocase sonkortu wuxuu heystaa aag weyn. Dalaggii 2003dii waxaa lagu qiyaasay 5.86 milyan hektar. Goobaha ugu waaweyn ee la saaro dabocase sonkorta waxay ku yaallaan Ukraine, Ruushka, Shiinaha, Booland, Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka, Talyaaniga; waxaa lagu beeray Belgium, Belarus, Japan, Hungary, Turkey, Georgia.
Wadamada yurub, sonkorta dabiiciga ah waxay soo saartaa ilaa 80% wadarta goosashada adduunka oo dhan. Xiddigo sonkorta waxay u baahan yihiin qorraxda, kulaylka iyo qoyaan dhexdhexaad ah. Dalalka ay yihiin hoggaamiyeyaasha wax soo saar ee xididada? Ma koray dhaqanka Ruushka? Xaqiiqda iyo xogta saxda ah.
Xagee sii kordhaya, waa maxay cimilada iyo ciidda "jecel"?
Dhaqanka si wanaagsan ayuu u koraa qorraxda. Dalagga doofaarka uma dulqaadanayo roobab culus iyo abaar. Fogaanta badan ee roobabku waxay si xun u saameeyaan horumarinta tuber-gooyaha, xayiray sonkorta sonkorta.
Heerkulka ugu wanaagsan ee biqilka ee xididdo waa 20-25 digrii, horumarinta digriiga - 30, loogu talagalay isku ururinta iyo synthesis ee sonkorta - 25-30 digrii.
Xuduudaha dalagyada sii kordhaya waxay u qaybsan yihiin 3 kooxood.
Fit. Carrabka madow, soddon-soddon, sod ama bac. Xayawaanka iyo daacuunka ayaa sidoo kale ku habboon.
Aan macquul ahayn. Cawska dhoobada ah iyo xayawaanka culus, automorphic.
Gebi ahaanba aan habooneyn. Xagsan, glaze iyo gley (miiray oo aan loo baahnayn), biyo la geliyey.
Tilmaamaha ku habboon ee kiimikada ayaa ku kala duwan 6.0 ilaa 6.5. Waxaa sidoo kale loo ogolyahay inay koraan inta u dhaxaysa 5.5-7.0.
Soo saarida iyo dhoofinta dalalka
Hoos waxaa ka mid ah darajada 5 dal oo hogaamiya wadamada soo saarka sunta sonkorta.
Turkiga booska 5aad. Tani waa wadan kulul leh jawi ku haboon. 16.8 milyan oo ton ayaa halkan lagu helaa sanadkan, dalkaan wuxuu ku yaal Ukraine oo ku jira liiska (waxsoosaarka 16 milyan oo tan).
4 booska USA. Sannadlaha sannadlaha ah waa 29 milyan oo tan oo ah dalka, marka laga reebo beerashada hadhuudhka iyo qamadida, hadhuudhka sonkorta ayaa sidoo kale si firfircoon loogu koray. Labada shirkadood ee dadweynaha iyo beeralayda hiwaayadda ah ayaa tan ku hawlan.
Furan saddexda jarmalka ugu sareeya (30 milyan oo tan). Waddanku wuxuu muddo dheer haystay aqoonsi soo saaraha iyo soo dhoofiyaha sonkorta sonkorta. Sonkorta iyo sonkorta sonkorta leh ayaa sidoo kale la dhoofiyaa.
Goobta labaad - Faransiiska. Wax soo saarka sannadlaha ah - 38 milyan oo tan Tiro ka hor, waxaa loo tixgeliyaa hoggaamiyaha ururinta xididada. Goobaha aan dhammaadka lahayn ee ciidda bacrin ah iyo cimilada diiran waxay suurtogal u tahay inay si joogto ah u soo gasho khudaarta hodanka ah. Goobaha wax soo saarka ugu weyni waxay ku yaalaan Gobolka Champagne. Waxay ku taallaa dhinaca koonfureed, marka lagu daro xididdo, canab kulul oo jecel ayaa halkan lagu koray si loo soo saaro khamri caan ah.
Ugu sareeya - Ruushka. Sida laga soo xigtay xogta 2017, in ka badan 50 milyan oo ton oo ah dabocase sonkorta ayaa laga soo saaray dalka. Inta badan ee badeecada la dhoofiyo, sonkorta waxaa la soo saaray saddex daloolow daloolka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan tiknooloojiyada soosaarista sonkorta laga bilaabo rootiga sonkorta, oo ay ku jiraan guriga, maqaalkani.
Waa maxay gobolka ugu weyn ee Ruushka ah?
Ilaa dhowaan, dalaga dalaggu wuxuu lahaa faa'iido koraya.
Tan iyo sannadka 2016, beerashada sonkorta sonkorta ayaa gaartay heer cusub, taasoo ka dhigtay suurtogalnimada in la qaado booska hogaaminaya qiimeynta adduunka. Markii hore, dhaqanka waxaa lagu kobciyay tiro yar, inta badan goosashada waxay u baxday si ay u quudiso lo'da.
Dalka Ruushka, dalagyada ayaa ku kordhay 3 gobol oo waaweyn, halkaasoo ay ku koraan xaalado wanaagsan oo loogu talagalay:
Koonfurta, Bartamaha Aagga Aagga Dhexe. Kani waa gobolka Krasnodar, gobolka Volga, gobolka Black Soil. Halkan waxa lagu helayaa 51% wadarta guud ee dalka.
Waqooyiga Caucasus (Stavropol, Vladikavkaz, Makhachkala). 30% soosaarka miraha.
Volga. Meelaha loogu talagalay dabocase sonkorta waxay ku yaalaan inta badan meelaha magaalooyinka Samara, Saratov (waxaan si faahfaahsan uga hadalnay tiknoolajiyadda casriga ah ee beeritaanka sonkorta sonkorta). 19% wadarta guud. Gobolka, waxaa jira 44 shirkadood oo ka shaqeynaya ilaa 40 kun oo khudaar xidid ah maalintii.
Sidaa darteed, dabocase sonkorta waa dalag farsamo oo laga sameeyey sonkorta la soo saaray (waxaad ka baran kartaa sida dabocase sonkorta loo isticmaalo iyo waxa la heley inta lagu gudajiray halkan). Digriiga dabocase waxaa ku jira sonkorta 17-20%. Hogaamiyeyaasha adduunka ee beerista rootiga xididka - Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka. In Ruush, sanamkii sonkorta badanaa ku koraa inta badan gobolka koonfurta.